Home Wararka Maxaa ka jira in Puntland ku fashilantay in mushaarka shaqqalaha lagu bixiyo...
Maxaa ka jira in Puntland ku fashilantay in mushaarka shaqqalaha lagu bixiyo lacag Somali?
Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa soo wajahaya maamulka Puntland culayska kakaga imaanaya meelmarinta istcimalaka lacagt Soomaaliga. Waxa ay ahayd 16-kii January ee sannadkan 2021 markii xukuumadda Puntland ayaa go’aamisay in mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada 20% lagu bixiyo Shilin Soomaali, si loo socod-siiyo isticmaalka Shilinka.
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa sidoo kale hirgelisay xarumo kooban oo qaabilsan sarrifka lacagta, halkaas oo dadka looga sarrifo Shilin Soomaaliga, si loo soo celiyo kalsoonida lagu qabo Shilinka. Haddaba, Tallaabadaas oo mudda lix bilood ah shaqaysay ayaa haatan caqabad ku timid, kadib markii xarumihii qaabilsanaa sarrifka ay si cad u diideen qabashada Shilin Soomaaliga.
Go’aankaan ayaa u muuqda mid saamayn ba’an ku yeelatay shaqaalaha kala duwan iyo ciidamada Puntland oo 20% mushaharka ku qaata Shilin Soomaali, kuwaas oo hadda aan haysan cid u sarrifta lacagta.
“ waxa nala dhahay: dowladda ha ceebaynina ee wixiina guryaha dhigta (Shilinka), hadaad sarrif u waydeen” ayuu yiri qof shaqaale ah oo ka gaabsaday in magaciisa la xigto. Waxa xusid mudan, in lacagta shilin Soomaaligu aysan haatan ka shaqayn gudaha Puntland, iyadoo aysan wax isbeddel ah keenin dhammaan go’aannadii dowladdu ku wajahday socod-siinta Shilinka.